खोपमा विभेद र विकासशील देशको सङ्घर्ष - Online Majdoor
अन्तर्राष्ट्रिय विचार विशेष समाचार स्वास्थ्य
खोप समानतामा धनी देशहरूको अनैतिक स्वार्थी व्यवहारले के स्वच्छ अर्थतन्त्रको निर्माणमा मद्दत गर्ला ? पक्कै गर्नेछ, यदि हामीले त्यसको निम्ति लड्न सक्यौँ भने ।
कुटनीतिज्ञहरू जब अभियन्ताहरूजस्तै बोल्न थाल्दा हामीले बुझ्दै छौँ, भूराजनीति बदल्न थालेको छ । यो साता संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनिओ गुटरेजले विश्व नेताहरूसामु खोप असमानताको भयावह अवस्थाबारे लामै भाषण सुनाए । खोप असमानतालाई उनले ‘संसारका देशहरूको नैतिक पतन’ को संज्ञा दिए । “यो अनैतिकता हो”, उनले भने । पन्ध्र दिनअघि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका महानिर्देशक डा.टेड्रोस अधानम घिब्रिएससले सञ्चारमाध्यमलाई भनेका थिए, “विश्वव्यापी खोप आपूर्तिमा नियन्त्रण गर्ने कम्पनी र देशहरूले संसारका गरिब देशहरूलाई पछाडि छोड्दा म कदापि पनि चुप लागेर बस्न सक्दिनँ ।”
गत साता संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा संसारका सबै विकासशील देशहरू (द ग्लोबल साउथ) ले खोपको प्याटेन्ट अधिकार अरू देशलाई दिन नचाहेकोमा पश्चिमा देशहरू र औषधि कम्पनीहरूको भत्र्सना गरे । पेरूका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिल्योले कोरोनाभाइरसको खोपमा समान र सुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको माग गरे । उनले महामारीले ‘सहजता र ऐक्यबद्धताको सिद्धान्तअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीले काम गर्न नसकेको’ देखाएको बताए ।
कोभिडको कारण धेरै सङ्ख्यामा मानिस मर्ने देशहरूमध्ये एउटा देश पेरू पनि हो । ३ करोड २० लाख जनसङ्ख्या भएको पेरूमा कोभिडको कारण २ लाख मानिसको निधन भइसकेको छ । हालसम्म त्यहाँको कुल जनसङ्ख्याको ३० प्रतिशतभन्दा कम मानिसले मात्र कोभिडको खोप लगाएका छन् ।
संसारका अधिकांश देशका जनतालाई कोभिडको पहिलो मात्रा खोप पनि दिन नसकिरहेको अवस्थामा संरा अमेरिका र बेलायतजस्ता पश्चिमा देशहरूले आफ्ना नागरिकलाई तेस्रो मात्रा खोप दिन थालेको देखेर विकासशील देशका नेताहरू चाहे उनीहरू वामपन्थी हुन् वा दक्षिणपन्थीहरू, सबै आक्रोशित भएका छन् । संसारभर ६ अर्ब खोप वितरण भइरहेको छ । तर, त्यसको तीन–चौथाइ खोप मात्र दस देशमा वितरण भएका छन् । बेलायतले आफ्ना ६७ प्रतिशत जनतालाई पूर्ण खोप दिइसकेका छन् । तर, सिङ्गो अफ्रिकामा भने जम्मा तीन प्रतिशत जनताले मात्र पूर्ण खोप लगाएका छन् । न्यून आय भएका देशहरूले आफ्ना कुल जनसङ्ख्यामध्ये मात्र ०.५ प्रतिशतले मात्र खोप लगाएका छन् ।
धनी देशहरूले ‘आफू प्रथम’ मात्र भनेनन्, बरू ‘आफै प्रथम, आफै दोस्रो, आफै तेस्रो र आफै चौथौँ’ भनिरहेका छन् ।
विश्वव्यापी आक्रोशको दबाबमा संरा अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले यो साता थप ५० करोड खोप विश्वव्यापी वितरणको लागि दिने वाचा गरेका छन् । यो समेत गरेर संरा अमेरिकाले १ अर्ब १० करोड मात्रा खोप उपलब्ध गराइसकेको छ । धनी देशबाट झरेको यो सानो थोपाले थोरै भए पनि प्यास मेटिनेछ । तर, यति खोप भनेको निकै थोरै हो । त्यसकारण धेरै विकासशील देशका नेताहरूले यो सहायता अपुग भएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् । समस्या विश्व अर्थतन्त्रमा छ । विश्वको आजको अर्थव्यवस्थाले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई खोपको प्याटेन्ट अधिकार दिएको छ । फलतः खोपमा एक प्रकारको एकाधिकार स्थापित छ ।
धनी देशसँग अतिरिक्त खोप भए पनि विकासशील देशहरूले पाउने अपेक्षा गर्न सक्ने खोपभन्दा उनीहरूसँग निकै कम मात्र खोप उपलब्ध छ । खोपको आपूर्ति बढे पनि असमानता भने अझ फराकिलो बनेको छ । उन्नाइसौँ शताब्दीमा बेलायती साम्राज्यअन्तर्गतको भारतमा भएको अनिकालको प्रसङ्ग यहाँ स्मरणीय छ । त्यत्तिबेला समस्या खाद्यान्नको अभाव थिएन । बरू बजार व्यवस्था थियो । गरिबको आवश्यकतालाई भन्दा धनीको नाफालाई बढी दिने बजार प्रणालीको कारण त्यो अनिकाल भएको थियो ।
एकाधिकारको कारण किन यति धेरै आक्रोश फैलिएको भन्ने विषयमा बुझ्न भने औषधि उद्योगका केही नयाँ तथ्याङ्कमा ध्यान दिनु समिचीन हुनेछ । यो वर्ष सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा धनी देशहरूसँग अतिरिक्त १ अर्ब २० करोड खोप हुनेछ । त्यतिञ्जेल १२ अर्ब खोप उत्पादन भइसकेको हुनेछ । विकसित देशहरूमा यति धेरै अतिरिक्त खोप भएको सङ्ख्या घोषणा गर्दै गर्दा संसारका अधिकांश देश खोपको लागि निर्भर रहेको कोभ्याक्सले भने यो वर्षको अन्त्यसम्ममा खोप वितरणको सन्दर्भमा आफूले तोकेको लक्ष्य पूरा गर्न ५० करोडभन्दा बढी खोपको अभाव हुने बताएको छ ।
अर्को शब्दमा, धनी देशसँग अतिरिक्त खोप भए पनि विकासशील देशहरूले पाउने अपेक्षा गर्न सक्ने खोपभन्दा उनीहरूसँग निकै कम मात्र खोप उपलब्ध छ । खोपको आपूर्ति बढे पनि असमानता भने अझ फराकिलो बनेको छ । उन्नाइसौँ शताब्दीमा बेलायती साम्राज्यअन्तर्गतको भारतमा भएको अनिकालको प्रसङ्ग यहाँ स्मरणीय छ । त्यत्तिबेला समस्या खाद्यान्नको अभाव थिएन । बरू बजार व्यवस्था थियो । गरिबको आवश्यकतालाई भन्दा धनीको नाफालाई बढी दिने बजार प्रणालीको कारण त्यो अनिकाल भएको थियो ।
आज धनी सरकारहरूले यो महामारीमाथि नियन्त्रणको जिम्मा बजारलाई छोडेको छ । बजार भन्नाले ठुलठुला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू हुन् । ती कम्पनीहरूले ठूलो परिमाणमा जनताको पैसा गोजीमा हालेका छन् । तर, आफूसँग भएको जानकारी भने अरूलाई दिन चाहेका छैनन् ।
यो साता एमनेस्टी इन्टरनेसनलले मानवीय सङ्कट अझ सघन बनाउन ती औषधि कम्पनीहरूलाई दोषी बताएको छ । एमनेस्टीले खोप उत्पादनमा सबभन्दा अघि रहेका पीफाइजर र बायोटेकले न्यून आयका देशहरूलाई उपलब्ध गराएको कुल खोपको मात्राभन्दा स्वीडेन एक्लैलाई मात्र नौ गुणा बढी खोप दिएको बताएको छ । खोप बेचेर सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा मात्र पीफाइजर, बायोटेक र मोडर्नाले १ खर्ब ३३ अर्ब अमेरिकी डलर नाफा कमाउनेछ । यद्यपि, तीमध्ये कुनै पनि अथवा कुनै पनि पश्चिमा उत्पादकले खोप उत्पादनको निम्ति आवश्यक जानकारी अरूलाई दिन तयार भएका छैनन् । उनीहरूको नाफाको स्रोत नै गोप्यता भएको छ ।
त्यसकारण यस्ता एकाधिकार सिर्जना गरेको प्याटेन्ट अधिकार अन्त्य गरेर र खोप बनाउने जानकारी अन्य देशहरूलाई पनि दिएर सबै देशलाई आफ्नो लागि आवश्यक खोप आफैले उत्पादन गर्न सक्ने बनाउनुभयो ।
अधिकांश विकासशील देशहरूको यो प्रमुख माग बनेको छ । उनीहरू ‘जनताको खोप’ अभियानलाई जोड दिइरहेका छन् । झन्डै एक वर्षअघिदेखि विश्व व्यापार सङ्गठनमा यो विषयमा वार्ता चलिरहेको छ । तर, त्यो प्रस्ताव मुख्यतः युरोपेली देशहरूले रोकेका छन् । विशेषतः जर्मनी र बेलायतले यो प्रस्तावमा रोक लगाएका छन् ।
यो साता देखिएको आक्रोशको कारण त्यही हो । धेरैको लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली नैतिक रूपमा टाँट पल्टिसकेको प्रमाणित भएको छ । धेरै देशहरूले आफूलाई अत्यावश्यक औषधिको निम्ति विश्व व्यापार प्रणालीमा भर पर्ने अवस्था रहेन । उनीहरूले औषधिमा आफ्नो अधिकार खोजिरहेका छन् । त्यही भएर विश्व व्यापार सङ्गठनमा उनीहरूले प्याटेन्ट अधिकार खारेजीको लागि लडिरहेका छन् ।
बेलायत र जर्मनीजस्ता देशहरूको खेलबाट आजित विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको समर्थनप्राप्त विश्वका विकासशील देशहरूले यो विषयलाई आफ्नो हातमा लिन थालेका छन् । एउटा उत्साहवद्र्धक विकास भनेको ‘एमआरएनए हब’ को स्थापना हो । त्यसअन्तर्गत पीफाइजर र मोडर्नाको खोपमाथि अनुसन्धान गर्ने र सिधै अप्र्रिmकाको दक्षिणी भागमा खोप उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सार्वजनिक पैसाले बनाएको मोडर्ना खोपका सीईओ अर्बपति भइसकेका छन् । लाजमर्दो कुरा, खोप बनाउने तरिकाबारे उसले कसैलाई भनेको छैन । हबले पक्कै पनि मोडर्नाको नक्कल गरेर खोप बनाउन प्रयास गर्नेछ । अनि बिनाअनुमति खोप उत्पादन गर्नेछ ।
एसियामा त्यस्तो हब इन्डोनेसियामा बनाउने तयारी गरिरहेको छ । एमआरएनएको परिवर्तनकारी क्षमताको आधारमा यसले कोभिड–१९ विरूद्धमात्र होइन, एचआईभी, क्यान्सर, मलेरिया र अन्य रोगको पनि खोप वा उपचारमा ठूलो योगदान गर्नसक्छ । यो महत्वपूर्ण विकास हो । यसको अर्थ यो क्रान्तिकारी प्रविधिलाई नाफामुखी बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट खोसेर नितान्त फरक चिकित्सकीय अनुुसन्धान प्रणाली बनाउन सकिन्छ ।
स्वास्थ्य आपत्काल सामना गर्न संसारको अक्षमता मात्र अहिले प्रकाशमा छैन । धेरै देशहरूले अहिले विश्व अर्थतन्त्रका नियमहरूप्रति नै अविश्वासले जलवायु परिवर्तनदेखि सदाशक्तिमान ठूलो प्रविधिले मानव अधिकारमा तेस्र्याएको चुनौतीसम्मका गम्भीर प्रश्नलाई सही ढङ्गले समाधान गर्न सक्दैन । विकासशील देशहरूका औषधि प्रणाली बनाउनुपर्ने प्रयोगले पनि हामीलाई अर्को बाटो हिँड्न झक्झकाइरहेको छ ।
यदि आजको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीले मानव जातिलाई असफल बनाइरहेको छ भने हामीले त्यसलाई पुनःनिर्माण गर्नुपर्छ । धनीहरूले रोक्न सक्ने अन्त्यहीन वार्ता गरेर होइन, आज र यहीँ नै नयाँ वास्तविकता सिर्जना गरेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली पुनःनिर्माण गर्नुपर्छ ।
(लेखक बेलायतको ग्लोबल जस्टिस नाउ अभियानमा आबद्ध हुनुहुन्छ ।)
नेपाली अनुवादः मेरिना
किन एमसीसीको घाँडो ?
स्वास्थ्य र स्वाद